Manazava ny antony tsy tokony hisorohana ny fanivanana ny "Unsubscribe" ao amin'ny Spam
Samy mahazo mailaka tsy alaina sy mailaka isan'andro isika rehetra ary tsy ampy ny fanadiovana na fanivanana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Notubscribe. Ny sasany amin'ireo mailaka voaray dia afaka mampiditra rohy mampiahiahy izay tsy ho ela dia olana lehibe ho anao. Ny vintana dia ny hampitsaharana ny fampahalalam-baovao maro momba anao, toy ny tsipiretiranao momba ny carte de crédit, ny PayPal ID, ny solonanarana, ny tenimiafina, ny adiresy an-trano, ny laharan'ny lahatahiry ary ny adiresy fandraharahanao. Azonao atao koa ny manome azy ireo fahafahana hampiditra ny rafitrao amin'ny malware sy viriosy. Mazava ho azy fa tsy ny olona rehetra izay mandefa mailaka anao dia mpanala na hacker. Raha fantatrao ny mpanolotra anao manokana ary inoany fa azo itokisana izy, dia afaka manokatra safidy malalaka ianao ary mamaky mivantana ny mailaka.
Eto, Max Bell, ilay mpitantana ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt dia nanonona ny antony mety hanimba anao amin'ny alàlan'ny fampitam-baovao na ny mailaka fampiroboroboana ho anao:
1. Nohamafisinao ny adiresy imailakao amin'ny hacker:
Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahafantatra fa mety hampidi-doza azy ireo amin'ny alalan'ny fisintonana ny bokotra Unsubscribe satria izy ireo dia manamafy ny hackers fa ny adiresy mailaka dia sady mavitrika no marina. Ohatra, raha misy mpandefa iray misahana ny fampielezana malware amin'ny aterineto ary efa nokarohinao tamin'ny raki-bolana, dia ho fantany fa mavitrika ny IDanao ary mijery ny mailakao matetika. Ny ampahany ratsy indrindra dia izao dia hahazo alalana mailaka avy amin'ny spammers ianao, izay te-hitebiteby..
2. Maneho fahalianana amin'ny tolotra nataony ianao:
Raha vao tsindrio eo amin'ny bokotra Unsubscribe, dia avelao ny mpilalao hahafantatra fa namaky ny mailakao ianao ary liana amin'ny tolotra nataony. Amin'io tranga io, dia mbola hanohy mandefa hafatra sy hafatra fanampiny izy ireo. Ny famakiana ny mailaka sy ny fanokafana ny atiny dia ho lasa zava-dehibe ho anao. Raha tsy izany, dia handrahona anao izy ireo hanaparitaka ny antsipirihanao manokana amin'ny aterineto. Ny zava-dehibe amin'izy ireo dia ny volanao, ary mety hiantso azy ho mpanjakavavy vahiny ianao ary hangataka fanampiana aminao.
3. Mety tsy mahazo mailaka avy amin'ny namanao sy ny fianakavianao ianao:
Ny hackers na spammers dia afaka mametra ny adiresy mailaka ho an'ny hafatra ananany manokana; Midika izany fa tsy ho afaka hahazo mailaka avy amin'ny namana, mpanjifa, ary olona ao amin'ny fianakaviana ianao. Izany no antony tokony hisaintsainanao alohan'ny hikirakira ny bokotra "Unsubscribe" satria ny safidy dia ny handefa anao malware, hameno ny fandefasanao imailaka mba handraisana ny mailaky ny tenany manokana ary hisorohana ny fahatongavanao mailaka amin'ny faribolana.
Avelao aho hilaza aminao fa mety hosoka ny tsindry amin'ny bokotra Unsubscribe ary ny adiresy mailaka dia tsy hesorina amin'ny lisitry ny spam. Na izany aza dia azonao arahina ireto dingana ireto mba hisorohana ny mailaka tsy hampahatezitra anao amin'ny ho avy: Tsidiho ny adiresy mailaka amin'ny spammer ary aza kitiho ny bokotra Unsubscribe raha misy mailaka tonga ao amin'ny ordinateranao Spam. Maka fepetra avy hatrany ary mametraka programa fanoherana malware. Sarotra be ny fandraketana fandaharana toy izany amin'ny aterineto Source .